Mashandisiro ekushandisa iyo yemagetsi DNI kana DNIe pane Mac | Ndinobva mac
Paul Aparicio | | Mac makomputa, Tutorials
Zvino makore matatu apfuura ndakavandudza chitupa changu. Ini ndaive neyekare vhezheni, iyo yandinofunga kuti ndinorangarira yaive hombe gwaro rine bhuruu kumashure uye iyo diki diki yaitaridzika kunge yakati "yazvino» kwandiri, pandakaona chip yeiyo DNI nyowani ndakafunga kuti: «Uye chii ichi ? ». Zvakanaka, ndicho chip cheDNIe uye, sezvamunoziva mese, semuenzaniso, ne "e" mu "e-mail", iyo "e" inowanzoreva "zvemagetsi". Asi ndeyei? Unoshandisa sei iyo DNIe paMac?
Iyo DNIe chinyorwa chinoshanda kuita zvimwe Maitiro eInternet, Semuyenzaniso. Icho chimwe chinhu senge kuita kubhengi kutengeserana pamhepo asi, zvine musoro, nehukuru matanho ekuchengetedza. Munyika yekomputa uko anenge munhu wese anoshandisa Windows, kuiwana kuti ishande paMac kunogona kunge kusiri nyore, ndosaka takasarudza kunyora ichi chidiki dhairekitori. Tevere isu tinokuudza iwe zvese zvaunofanirwa kuziva kushandisa iyo DNIe paMac uye usafe uchiedza.
Usati watanga iyo dzidziso, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe uchazoda yemagetsi ID muverengi kupedzisa iyo yese maitiro. Kana iwe uchiri usina imwe, pazasi iwe une sarudzo yemhando yepamusoro-yemhando mhando kuti iwe ugone kushandisa yako yemagetsi ID paMac yako.
Vimba DNI Reader, ...
Sveon SCT011M - Reader ...
Woxter ID muverengi ...
1 Kwokutora kupi chitupa cheDNIe
2 Mashandisiro ekushandisa iyo yemagetsi DNI paMac
3 Zvemagetsi DNI muverengi weMac
Kwokutora kupi chitupa cheDNIe
Usati waita chero mhando nyowani yekumisikidza (isina yekuvandudza, hongu), zvakakodzera kuti uve nechokwadi chekuti isu hatina chero zvasara zvekumisikidza yapfuura kuiswa. Kana isu tine chokwadi chekuti hatina kumboishandisa, tinogona kuenda zvakananga kune kuiswa kwevatyairi vatsva. Kana zvisiri, isu tinobvisa chero matanho nekuita zvinotevera:
Isu tinovhura iyo Terminal. Iri mufaira Zvishandiso / Zvishandiso, kubva kuLaunchpad muDock kana kuitsvaga kubva kuSpotlight.
Tinonyora dsenableroot kumisikidza superuser.
Izvo zvichatibvunza isu password yemushandisi wedu. Isu tinozvizivisa.
Ichazobvunzawo iro password password. Isu tinosuma iyo yatiri kuda, asi zvakafanira kuti ive iyo yatinogona kurangarira kana tikazomboda kuita zvinhu seizvi zvakare.
Isu tinoenda ku / Raibhurari uye tinodzima iro Libpkcs11-dnie dhairekitori
Isu tinovhura terminal uye tinopinda zvinotevera:
sudo rm / var / db / risiti / * dni *
Iye zvino tinobvisa iyo account account nemirairo dsenableroot -d
Zvino zvatave nezvose zvakachena isu tinongofanira kuenda Iri peji, tora mafaira uye woaisa.
Mashandisiro ekushandisa iyo yemagetsi DNI paMac
Iine iyo faira yatove kuiswa, kumisikidza kuri nyore sekukanda-kaviri pane iyo .pkg faira uye nekutevera mirairo (iyo inosanganisira kuisa yedu yekushandisa password), isu tinopfuurira ku gadzirisa uye shandisa DNIe paMac. Tichazviita nekutevera matanho aya:
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndechekuti, kana tisina icho chakaiswa, enda kune iyo Peji reMozilla, tora nekuisa Firefox webhu browser. Nhoroondo, Safari haina kufambidzana zvakanaka nemapeji mazhinji ewebhu uye ichi chinhu chinoitikawo murudzi urwu rwezvitupa hazvishande neiyo default browser yeOS X. Chero zvazvingava, zvinogara zvakakodzera kuve neyechipiri webhu browser. kune izvo zvinogona kuitika, uye kwandiri Firefox ndiyo yechipiri yakanakisa sarudzo ye mac.
Nhanho inotevera ndeyekuisa chitupa muFirefox. Kuti tiite izvi, tinovhura Firefox, ticha Zvaunoda / Zvemberi / Zvitupa uye tinobaya Zvishandiso zvekuchengetedza.
Isu tinopa iyo module zita (semuenzaniso, DNIe PKCS 11 module).
Isu tinoratidza nenzira nzira iyo module ichave iri inotevera: Raibhurari / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so
Kuisa chitupa chemidzi chatiri kuenda Zvaunofarira / Advanced /Zvitupa/ Ona zvitupa / Zviremera.
Isu tinosarudza Import.
Isu tinofamba kuenda kunzira yesitifiketi iyo ichave iri / Raibhurari / Libpkcs11-dnie. Mune yangu kesi, yaive mune iyo dhairekitori zvakananga. Kana iyo isipo, isu tinoitsvaga iyo mugova folda mukati meimwe nzira.
Tinomaka mabhokisi matatu.
Pakupedzisira, tinodzvanya OK.
Izvo zvinosarudzika, asi zvakakurudzirwa, Tangazve komputa yako kuitira kuti usapinda mune chero dambudziko risingatarisirwe. Kana yadzoreredzwa, zvese zvinofanirwa kushanda pasina matambudziko. Zvingave zvakare zvinonakidza kusabatanidza iyo DNIe kuverenga kusvikira Mac yatanga.
Para tarisa kana zvese zvichishanda zvakanaka, unogona kuwana peji rino iro iro Mapurisa eNyika anotipa . Kana iro peji risingatakure, chimwe chinhu chatakaita kana chimwe chinhu chakanganisika. Zvinogona kunge pasina kadhi rakaiswa, semuenzaniso. Chinhu chakanakisa mune idzi kesi kubvisa uye kuisa iyo USB yemagetsi DNI kuverenga, tarisa kuti pane kadhi uye wotangazve zvakare. Kana isu tikasawana mhosva, inogona kunge iri pfungwa yakanaka kutanga kubva pakutanga, asi panguva ino matanho ese achadikanwa, kusanganisira kubvisa mhando dzekare dzevatyairi uye chitupa.
Rangarira kuti chitupa chinongoshanda chete kwemazuva makumi matatu. Mushure menguva iyoyo, zvichave zvakakodzera kurodha pasi uye kuisa chitupa zvakare.
Zvemagetsi DNI muverengi weMac
Zvese zvakatsanangurwa pamusoro hazvizotibatsire kana isu tisina electronic ID muverengi. Nenzira imwecheteyo yatichada muverengi wekunze kuti tikwanise kuverenga makadhi e SD mune iMac, isu tichafanirwawo kutenga muverengi ID yemagetsi.
Ndeupi muverengi akakosha kutenga? Zvakanaka ndiwo mubvunzo wemamirioni emadhora. Pane zvakawanda zvingasarudzwa uye mazhinji acho anozotishandira zvakakwana, asi isu tinogona zvakare kuwana chimwe chinhu online chisina kukodzera icho. Chandinowanzoita kana ndichida kutenga chero chinhu ndechekuti tarisa mukati Amazon, iyo kwandiri ndeye yakanakisa online chitoro chiripo. Uye zvakare, kunyangwe chiri chokwadi kuti mamwe makomendi anogona kutengwa kana hunyengeri, Amazon inoedza kudzivirira aya mazwi kuti asaonekwa pane webhusaiti yayo, saka ongororo zhinji dzatinoverenga dzinenge dziri dzechokwadi.
Sarudzo yakanaka, iri chokwadi mutengesi wekutanga werudzi urwu rwemuverengi paAmazon, ndiyo Woxter Magetsi DNI , asi wow! Izvo ndeyeWindows neLinux. Iyo KuchenaBox CRCOOCRE065 Iyo ine kunyange ratidziro iri nani uye inowanikwa kuMac.Asi chenjera, uchigara uine chokwadi chekuti inowanikwa Mac.
Chii Iwe unotoziva kushandisa mashandisirwo emagetsi DNI paMac?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Mashandisiro ekushandisa iyo yemagetsi DNI kana DNIe pane Mac
Ndatenda zvikuru nedzidziso, inobatsira uye iri nyore kuita
Zvakanyatsoita dzidziso. Asi ... Pane chero munhu anoshandisa iyo yemagetsi DNI?, Imwe kutadza kwehutungamiriri.
Pindura kuna AmstradUser
Ungaziva sei kuti haugare kunze kwenyika 😉
Kutenda, ndanga ndichiedza kuiisa kwenguva uye pakanga pasina nzira. Ini ndaigara ndiinayo mumahwindo uye ndaipotsa. Ehezve iyo inobatsira kwazvo, zvirinani kwandiri.
Sergio Martos Sanchez akadaro
Mhoroi, ndine dambudziko nechiteshi, nekuti hachizive password yangu yemidzi, ndinofungidzira ndinofanira kunge ndatova neimwe uye ini handicharangarira…. Zvinoita here kuti uzvizive?
Pindura Sergio Martos Sánchez
Bvunzo mudzi kana toor
Mhoro kwandiri, mugadziri anondiudza kuti dambudziko raitika uye harina kungoiswa chete
Mhoroi, ini ndiri kugona kuisa chirongwa ichi, zvinondipa kukanganisa uye kumisikidzwa hakupedze.Pane mazano?
Ini ndakwidziridzira ku macOS Sierra uye kuyedza kuisa iyo .pkg faira rinondipa kukanganisa. Ini ndinofungidzira isu tinofanirwa kumirira iyo Sierra package kuti ivandudzwe?
Izvo zvinoitika kwandiri zvakare. Ndiine Sierra, wangu DNIe amira kushanda
Uchishandisa iyo DNIe neMac kutambudzwa. Kutenda iyo dzidziso yakaburitswa muSoydemac ndakange ndazviwana: asi mufaro wangu mutsime neiyo nyowani OS Sierra. Izvo zvakakosha kuti basa rangu riwane siginicha yedigital, ingave iyo FNMT Chitupa kana iyo DNIe uye zvese zvinhu zvinondikundikana. Ndiri kufunga nezvekutenga Windows PC (uye kunyangwe kushandisa Explorer, inoita kunge ndicho chinhu chete icho FNMT neDNIe vanoziva mushe). Mushure memakore makumi maviri nemashanu ndichishandisa Mac chete ndinowana chiri chinwiwa chakashata, uye ichave iri joki remamwe matangi ehove. Pane chero munhu anotarisira zvine musoro kuti DNIe inogona kushanda pane yakagadziridzwa Mac? (kana chitupa: zvakafanana: Ini ndakapotsa ndaifarira. Payaive ichikandwa yaikurumidza)
Uye hazvisi nyore here uye zvakachipa kuisa Windows paMac yako uye kuishandisa kuburikidza nemusasa webhuti kana kugadzira muchina chaiwo uchishandisa VMWare? Zvisinei, ndinobvumirana newe, kushandisa iyo DNIe paMac kutambudza, asi iko kukanganisa kuripo kune zvisina basa kweHurumende. Ndakanga ndazviwanira kare, asi ikozvino ndanga ndichida kuishandisa zvakare uye hapana nzira. Ini handizive kana iri nekuti ndiri kushandisa beta ye macOS, ndiani anoziva. Chandakanga ndisina matambudziko nazvo kare chine chitupa chaunotora kubva kuFNMT uye wochishandisa kuburikidza neFirefox, kunyange vachitokumanikidza kushandisa browser panzvimbo yeSafari, inova imwe.
Pindura kuna mag
Pindura kuna javierfc
Izvo hazviite kuti ndiwedzere iro Raibhurari / Libpkcs11-dnie / lib / libpkcs11-dnie.so module
Pindura kune celiamoar
Handikwanise kuzviita neSierra uye ndinoida. Pane chero munhu akagona kuiisa?
Pindura kuna pedrazajaAngel
Estíbaliz Ivars Miralles akadaro
iwe unofanirwa kuita tenzi yekuisa muverengi, uye hapana nzira yekutora
Pindura Estíbaliz Ivars Miralles
Hazvigoneke neSierra ... hapana nzira
Kugadziriswa! Kuti uise iyo .pkj package, unofanirwa kunge uine Firefox yakaiswa paMac, kana isina kuiswa, inopa kukanganisa paunenge uchiisa iyo .pkj. Kana package yacho yaiswa, iwe uchaona matanho aunoteedzera kumisikidza Firefox kuti ugone kuishandisa neiyo yemagetsi ID. Zvinotaridza kuti ichi ndicho chega browser chinoshanda neiyo DNI paMac iri Firefox
Unogona here kufadza kuratidza panowanikwa nhanho dzinotevera kana uchigadzira Firefox kuti ugone kuishandisa neiyo DNIe?
Ini ndatorodha pasi Firefox uye kana ndichiisa iyo pkg faira inondipa kukanganisa.
Ndinokutendai zvikuru !!!
Ramón Martínez deVelasco akadaro
Mhoroi, Zvese zvakaiswa uye zvinoshanda nemazvo, asi iwe unoti: «Rangarira kuti chitupa chinoshanda chete kwemazuva makumi matatu. Mushure menguva iyoyo, zvichave zvakakodzera kurodha pasi uye kuisa chitupa zvakare. Ndeipi chinhu chekutora nekuisa zvakare? Iwe unogona here kundipa chinongedzo kune iyo peji kwete yakananga kurodha chinongedzo ndapota? Ndatenda zvikuru pamberi. Kwaziso.
Pindura kuna Ramón Martínez de Velasco
@Pablo Aparicio: Unogona here kupindura chirevo changu, ndapota? Ndatenda zvikuru pamberi. Kwaziso.
Mhoro! Pane mumwe munhu angandibatsira here? Ini ndatevera matanho ese asi pandinopinda yako webhusaiti yekuchengetedza webhusaiti zvinondiudza kuti hapana zvitupa zvakaiswa ...
Pindura kuna Yoshian
Ini ndinowana kukanganisa kana ndichiedza kurodha module module?
Ndinokutendai zvikuru nebasa rose
Manheru akanaka, ngatione kana uchikwanisa kundibatsira, kana ini ndaisa iyo libpkcs11-dnie.so faira, zvinondiudza kuti "Chenjedzo, module haigone kuwedzerwa." Unoziva here zvekuita?
Ndine dambudziko rakafanana naDavid, meseji yekukanganisa paunenge uchiedza kurodha module: "Chenjerera, module haigoni kuwedzerwa"
Mhoroi apo!! Ini ndinofunga kuti iko kukanganisa kunopihwa nePKG imo nekuti Firefox haina kuiswa, yakandipa iko kukanganisa kumwe chete! zviedze !!!
Ini ndinodhawunirodha yapfuura module uye rega ndiimise zvakare, ndinochenesa kumisikidza ndotanga maitiro ese zvekare, asi ini handikwanise kuverenga iyo DNIe
MacBook Pro ine Sierra OS
Handizive kuti ndakaisa kangani, ndikadzima uye ndaiisa zvekare, ndichitevedza nhanho dzese. asi pandinoyedza kuwana iyo yemutero agency inondipa kukanganisa 403 inoshuva…. haikwanise kuwana iyo Dnie…. asi semuenzaniso kana firefox ikandibvunza kuti ndiwane zvitupa, inopinda pasina dambudziko…. Paul !!!! une zano here kuti chii chingaitika?
mumwe munhu anoziva kumwe kwavanoisa (zviri pachena kuve ini pamberi)
Ini ndatevera nhanho uye hazvishande kwandiri, ndakapa kukanganisa kana ndichirodha module. Mhinduro yanga iri ku LOGIN neIPA PKCS # 11 Module. Matanho ekutevera: vhura mozilla> zvaunofarira> zvakavanzika uye chengetedzo> zvidziviriro> sarudza NEW PKCS @ 11 MODULE> tinya pa INITIATE SESSION> ichakumbira kadhi reIDhi> gamuchira. Ipapo iwe unofanirwa kuvhara zvachose mozilla> raira + Q uye uvhurezve mozilla. Panguva iyoyo inotoziva module uye inoita kuti iwe ushande neiyo DNIe.
Izvi chete zvinoitika kwandiri: zvinondiudza kuti hazvigone kutakura iyo DNIE-PKCS # 11 module, ndobva ndaiikanda (ndinoibvisa mukati meFirefox Preferences) ndobva ndaiisa zvakare, asi bhatani START harishande.
Kana ini ndikasarudza muverengi ("Generic Smart kadhi ..." pasi peiyo DNIE-PKCS # 11 module) mune zvakatemwa zvinonzi "Hapana chipo" saka ndinomira pano.
Muverengi wangu ane yakasarudzika usb yekubatanidza asi yangu MacBook Pro ine OS Catalina ine chidiki chidiki cheUSB socket (oval plug yandisingarangariri zita racho) asi rinoziva muverengi (Ewent 1052), nekuti mu «About my Mac / Usb »Zviripo zvakakwana.
Chimwe chinhu: chitupa chinopera mumwedzi ndicho "ac_raiz_dnie.crt"? Chitupa ichi chakaburitswa paunenge uchiisa "libpkcs11-dnie-1.3.1_OSX-10.10_10.11.dmg"? Saka, pese pese iwe paunoda kushandisa iyo DNI-E mushure mechinguva uchafanirwa kuchenesa izvo Zvido uye kudzorerazve zvese?
Ndichaonga rubatsiro. Handizive kana foramu ichiri mupenyu. Ini ndinosiya email yangu kana mumwe munhu akapfuura uye achigona kujekesa kusahadzika kwangu.
hapana nzira yekuwana izvi:
Pindura kuna Simoni
Manuel Canteli Rodriguez akadaro
zvinonyadzisa asi… .. mumwe anopedzisira, achidzokera kuWindows kune chimwe chinhu chakakosha mumazuva edu sekushandisa chitupa cheDNI. Hapana anoziva kuti kune vashandisi vasiri mapurogiramu uye kuti isu tave kujairira chirongwa kutikumbira kuzadza mimwe minda uye kuti inopedzisira yaisa chirongwa chaunoda? Izvo zvave ZVINOGONESA nyore kuisa iyo yose Adobe package pane kuyedza kuita iyo yemagetsi ID kushanda.
Pakupedzisira chandinongofanira kuita kukumbira mwanakomana wangu kuti ndibvumire kushandisa PC yake.
Pindura Manuel Canteli Rodriguez
Mari cruz akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri: Chenjera Iyo module haigone kuwedzerwa. Kushandisa mari iri .Mac irikutaridza kusabatika.
Pindura Mari Cruz
Kubva pakuisa Catalina…. Izvo hazvigoneke kushandisa iyo DNIe.
Pindura kuna Aurelio
Ndakavandudza kune OS Catalina uye ndaifanira kumisazve zvese.
Jesu G. akadaro
Kunyanya kutariswa kune izvi: zvine chekuita neFIREFOX, zvinoita sekunge nhasi (Kurume 2020), chete iyo FIREFOX 68 vhezheni ndiyo inoshanda.
Dzakazotevera hadzisi dzechokwadi, nekuti hadzibatanidzi yakakosha yekuchengetedza sarudzo yekumisikidza zvitupa.
Izvi zvinoratidzwa pane iyo FNMT peji, mune system zvido zveMac.
Pindura Jesús G.
Handikwanise kuiisa …….
Ini ndinowana mabhokisi maviri ekugadzirisa kuvimba pane matatu….
Iko hakuna nzira….
Pindura kuna natalia
Mhoroi, ndakaita maitiro kubva pakutanga, ndichibvisa zvese zvisaririra zvemafolda sekutaura kwaPablo. Zvese zvinoshanda zvakakwana neCatalina uye a bit4u DNIe muverengi. Kuzvisainira-iwe, ok. Digitally kusaina maPDF ane adobe uye iyo DNIe, ok.
Churraco @ akadaro
Nzira yeMozilla Firefox haichashandi zvese pano uye pane peji rezvakaipa zveSpain
Pindura Churraco @
Izvo hazvishande paMacOS Big Sur.
Ndiri kuyedza kuiisa paMac neMojave (pane mavhezheni maviri pane peji remapurisa 1.5.0 uye 1.5.1, ndiri kuyedza kuisa 1.5.1). Zvinotaridza kuisa pasina zvikanganiso. Pakupera kwekumisikidza iyo inovhura tebhu yeFirefox pamwe nemirairo inoratidzwa mu "Mashandisiro ekushandisa iyo DNI yemagetsi paMac".
Nekudaro, ini pandinoisa module uye ndoenda kunotsvaga nzira mu library yekutevedzera nhanho, hapana chinhu, hapana dhairekitori "Libpkcs11-dnie" Saka handikwanise kuita matanho anondiudzwa naFirefox.
Izvi zvakaitika kune mumwe munhu, zvingagadziriswa sei?
Mumwe mubvunzo uyo unganzwika seusina musoro, zvakafanira here kuti muverengi abatanidzwe kune usb panguva yekumisikidza uye iyo DNIe yakaiswa muverengi? Izvi zvinogona kuve nechokuita nezviri pamusoro.
Ndiri kukurumidza kwazvo kugadzirisa izvi kuti ndiratidze gwaro uye rutsigiro rwemapurisa rwehunyanzvi harubatsire ini…
Kana ini ndine chitupa cheFNMT chakaiswa, ndinofanira zvakare kuidzima? Kana kuti hazvina basa here? Izvo ndezvekuti ndisati ndawana NIE uye ini ndaive nechitupa cheFNMT chekuita maitiro asi izvozvi ndine DNIe uye ini ndaida kuisa izvi…. zvakajeka tekinoroji hachisi chinhu changu
MHORO. Ndatenga trust reader yaunokurudzira muchinyorwa uye ndine MAC HIGH SIERRA 10.13. sezviri pachena haitsigirwi. nekuti kana ndine mepu yese kadhi yakatorwa, haione muverengi kuti atange chikamu.
Ndeupi muverengi waunokurudzira kune iyi vhezheni yeMAC? Ndatenda
Pindura kuna lorena
Hazvinditenderi kurodha chirongwa, saka hapana chandinogona kuita. Turikira kuti hutachiona kana zvakafanana. Ndakazviedza kubva kuSafari uye kubva kuChrome. Hazvigoneki.
Pindura kuna Anna
Ndakwanisa kuisa zvese, ndaona kuti inoshanda ndichitevedzera zvakataurwa nemapurisa asi pandinoda kuishandisa pane chero imwe peji inondipa kukanganisa. Inogara ichindikumbira password (Ndapota isai password yePKCS#11 electronic DNI token.) yandinonzwisisa kuti ndiyo yandinoisa paDNIe kukamba yemapurisa asi haishande. Pane anozivawo kuti dambudziko nderei?
Pindura kuna Lola
Apple inoburitsa yechitatu beta yeOS X 10.11.6 El Capitan
Spotify inodarika vashandisi vanosvika mamirioni zana